Laba Siyaabaha Undelete Notes on iPod xiriiri 4/5
> Resource > iPod > Sida loo Undelete Notes on iPod xiriiri 4/5
Maalmahan, dad badan waxay u muuqdaan in ay abuuraan notes la casriga ah, gaar ahaan dadka isticmaala qalabka Apple. Si kastaba ha ahaatee, qodobada ku qoran telefoonka aad si fudud u lumin. Maanta, aan ka hadalno sida loo undelete qoraalada ku iPod xiriiri 4/5.
2 siyaabaha aad ku undelete iPod qoraalada xiriiri on Mac ama Windows computer
Marka aan u kasayn tirtiray qoraalada ku saabsan iPod xiriiri 4 ama 5, ha ka welwelin. Waxaa jira 2 siyaabaha aad u si aad u hesho dib. Habka ugu horeysay yahay si loo hubiyo Lugood aad. Sida caadiga ah, Lugood abuuraa gurmad u qalab kasta synced la. Sidaa darteed, waxaad ka heli kartaa haddii aad synced aad iPod xiriiri Lugood dib markii idin abuuray qoraalada (iyo ka hor inta aadan iyaga tirtiray). Habka labaad waa in si toos ah baarista iPod xiriiro marka aanad lahayn gurmad Lugood, in qoraalada undelete ka iPod taabto.
No arrinta jidkii aad heli karto, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) . Labada iyaga ka mid ah ayaa kaa caawin kara in undelete qoraalada xiriiri iPod hab midkood.
Fiiro gaar ah: Labada ka mid ah qoraalkii Windows iyo Mac ogolaado in aad undelete qoraalada labada iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 5.
Bilowga, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah: soo kabsado Device macruufka ama ka soo kabsado Lugood ee kaabta File. Haddii aad rabto in aad si aad u hubiso in aad gurmad Lugood, ee ka dooro mid labaad. Ma aha in gurmad Lugood ah? Dooro mid ka mid ah hore.
Kabsado Device macruufka, (waayo, iPod xiriiri 5)
Kabsado Device macruufka, (waayo, iPod xiriiri 4): Click Download si aad u hesho a fur-in marka hore.
Kabsado Lugood ee kaabta File (labada iPod xiriiri 5 iyo iPod xiriiri 4)
Tallaabada 2. Sawirka aad iPod taabto ama Macdan gurmad Lugood
Kabsado Lugood ee kaabta File
Sida uu furmo suuqa kor ku qoran, oo dhan Lugood gurmad on your computer ayaa la helay iyo bandhigay si toos ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah si aad u iPod taabashada iyo riix Start Scan Macdan ka kooban gurmad. Uma baahnid in aad in ay ku xidhmaan aad iPod taabto si computer marka aad doorato sidan.
Kabsado Device macruufka (iPod xiriiri 5)
Waxaad si toos ah riixi kartaa Start Scan si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPod xiriiri 5 qoraalka laga badiyay waxaa ku.
Kabsado Device macruufka (iPod xiriiri 4)
Waxaad u baahan tahay inay soo galaan hab iskaanka xiriiri iPod ka dib markii aad iPod xiriiri xidhmaan kombiyuutarka. Oo raac hoose loo sameeyo. Waa ammaan iyo waxba ma yeeli doono oo dhan qalab aad. Just Raaca waxa ay isku dayaan.
Hay iPod taabto oo ka jaftaa button Start ee interface ee Dr.Fone ee macruufka.
Saxaafadda Power iyo badhamada Home aad iPod xiriiri waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Software tirin doonaa wakhti aad.
Fur button Power isla markiiba ka dib 15 ilbiriqsi, Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home ah.
Ka dib marka aad hesho hab iskaanka ah, barnaamijka iskaan doonaa qalab aad ahaantiisa.
Tallaabada 3. Undelete uyiri on iPod xiriiri 4/5
Marka scan dhamaado, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay natiijada scan. Dooro Notes dhanka bidix, ka dibna waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin ku saabsan xaq. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.